Nahazo tranofiara E2 sy famoahana daty ny famerenanana 'Resident Evil 3'! - iHorror
Home Lalao video Nahazo tranofiara E2 sy daty famoahana ny famerenana ny 'Resident Evil 3'!
Nahazo tranofiara E2 sy daty famoahana ny famerenana ny 'Resident Evil 3'!
by Eric Panico Jona 12, 2018
nosoratan'i Eric Panico Jona 12, 2018
The Playstation E3 ny kaonferansa vao nanambara ilay famerenana nandrasana hatry ny ela ho an'ny kilalao horohoro taloha malaza tamin'ny 1998 Amin'ny Mponina ratsy 2! Tamin'ny taon-dasa Amin'ny Mponina ratsy 7 dia fiverenana amin'ny fakany mahatsiravina an'ny franchise, taorian'ny lalao taty aoriana dia nanomboka niantehitra be loatra tamin'ny hetsika sy ny hetsika haingana. Ankehitriny ny Capcom dia mamerina antsika amin'ny fiandohan'ny valanaretina.
Amin'ny Mponina ratsy 2 dia ohatra maodely amin'ny filentehan'ny tahotra, ny atmosfera izay natsangana ny franchise, ary iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ity andiany ity. Ny voalohany Resident evil nahazo remaster HD nahomby be tamin'ny 2002, ary nanontany tena ny mpankafy nanomboka hoe rahoviana Amin'ny Mponina ratsy 2 hahazo fitsaboana mitovy amin'izany.
Eny, tapitra ihany ny fiandrasana.
Misokatra avy amin'ny fomba fijery mahaliana ny tranofiara rehefa mandady amin'ny talantalana izahay, ary nahita polisy nifanehitra tamin'ny olona tsy hita. Rehefa nipetaka tamin'ny tendrony izahay, dia nanambara fa nahita maso ny zava-nitranga tamin'ny alàlan'ny totozy (torotoro ankehitriny) izahay. Tonga tany an-tsaina ilay manamboninahitra, satria nilentika tao amin'ny tendan'ny polisy ilay nifina ary namiravira nofo goavambe.
Nisy ny poa-basy, ary nianjera tamin'ny tany ilay zombie (toy ny hoe maty tokoa) rehefa nahita ilay rookie Leon Kennedy nitsangana nihorohoro teo am-baravarana niaraka tamin'ny sisiny nifoka. Ny tranofiara avy eo dia mamely antsika amin'ny habetsahan'ny grunge, hiaka, ary ozatra mihosin-dra.
Capcom dia nanamboatra ny fampihorohoroana hatramin'ny 11 satria ny tonon'ny tranofiara dia nanjary maizina sy matanjaka kokoa (mitovy amin'ny Resident Evil 7). Hitanay koa i Claire Redfield izay niady hevitra tamin'ny fiverenany tamim-pandresena.
Ny tanànan'i Raccoon dia mbola tsy nisy nahatalanjona izaitsizy mihitsy rehefa nanadino ireo lalana efa nilaozan'orana sy tototry ny orana isika, mankamin'ny atitany feno rà sy feno rà. Ilay tranofiara dia mirehareha amin'ny jiro mahery vaika, mampivarahontsana ary sary manjavozavo tsara tarehy, miaraka amin'ireo maodelin-toetra tsy mampino. Mirehitra ny fiara, mihodinkodina manodidina ny zoron-trano ny zombie, ary hitantsika aza ny sasany amin'ireo fahavetavetana nanenjika ny nofinay ratsy. Zombie, ary Lickers, ary ny Tyrants… oh my.
Gamespot mitatitra ny fanambarana an-gazety fa manamafy ny lalao gameplay nihemotra avy Resident Evil 7's olona POV voalohany ho an'ny olona fahatelo mihoatra ny soroka. Na izany aza, ny lalao dia toa mitandrina tsara hatrany amin'ny horohoro mandehandeha fa tsy ny hetsika haingana. Zombies koa dia voalaza fa handray "fahasimbana hita eo no ho eo" amin'ny fotoana tena izy.
Soa ihany fa tsy hiandry ela intsony ireo mpankafy vao handeha eny amin'ny arabe feno zombie an'ny Raccoon City indray. Tapitra ny tranofiara tamin'ny fanamafisana ny daty namoahana ny 25 Janoaryth, 2019. Misy mialoha ny baiko hividianana ny lalao amin'ny Playstation 4, Xbox One, ary PC.
Zavatra iray no azo antoka… nihatsara tokoa ny feo.
Zahao eto ny tranofiara:
Ahoana ny hevitrao momba ilay tranofiara ?! Faly ve ianao hiverina any Raccoon City? Alefaso ao anaty hevitra ireo hevitrao!
Biohazardbiohazard 2CapcomE3Resident evilratsy ratsy 2
'Hereditary' dia fanokafana lehibe indrindra A24 teo amin'ny biraon'ny Box
'Fahafatesana ho faty' E3 tranofiara mihetsika miaraka amin'ny fahamendrehana mahitsy
'Tandem: Tale of Shadows' Trailer mampahafantatra mahatsiravina ...
Ny tranofiara 'STALKER 2' dia mampiseho antsika ireo horohoro ao ...
Tonga ny 'Ady lehibe Z: taorian'izany' amin'ny ...
Ny tranofiara 'Redfall' dia manolotra vampira tena milay ...
Tranofiara vaovao 'Back 4 Blood' feno ny ...
'Maty ratsy ilay lalao' manome antsika endrika ...
Mpandray anjara 'Olona hafahafa' Manatevin-daharana ny 'Maty Amin'ny Alavan'ny Andro' ao ...
Tranofiara 'Necromunda: Gun nalaina' feno ny Hellish, Cyberpunk, ...